#Ibrahimovic Oo Falanqeyey: "Dagaalka u dhexeeya Messi iyo Pogba" - Get Latest News From Horn of Africa
#Ibrahimovic Oo Falanqeyey: “Dagaalka u dhexeeya Messi iyo Pogba”
Manchester United ayaa la ciyaari doonta Barcelona tartanka Champions League. Zlatan Ibrahimovic waxa uu aaminsan yahay in ay tahay kulanka adag oo uu dhaxeyaa laba kooxood oo waaweyn.-Waxaan qabaa inay noqon doonto dagaal u dhexeeya Messi iyo Pogba, ayuu yiri Xidigan reer Sweden isaaga oo soo dhigay video ku xardhan astanta labadda kooxod oo uu horey ugu soo ciyaarey Cinwanka uu ku leyahay Twitter-ka.
Weeraryahanka reer Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa hore ugu soo ciayarey Barcelona iyo Manchester United, kuwaasoo bari ku kulmi doona semi-finalka Champions League oo ka dhacaya Old Trafford.
Zlatan Ibrahimovic ayaa kaga hadlay Videoga qeyb Barcelona, Waxaan uu yirii waxay ilaa tahay xiyaar aad uu xiiso badan dawashadeedana aad loo wada sugaayo,halkaasoo labo ciyaaryahan ay go’aan ka gaari karaan koox kasta.
– Waxaan qabaa inay noqon doonto ciyaar aad u xiiso badan. Waa labo xidigood oo waaweyn iyo laba kooxood oo waaweyn oo wada ciyaara. Labada kooxood waxay leeyihiin taariikh weyn oo la xusi karo, sidoo kale waa labaduba waa kooxo waa weyn. Waxan sugnaaba waa kooxda kooxda muujisa in ay tahay mid ugu xoogan maalinta, ayuu ku sheegay videoga uu soo dhiagay twitterka.
“Uma maleynayo inay tahay mid qof kaste ka qarsoon in Messi uu isbedel kusameeyo kulan kasta oo uu ciyaaro. Manchester United waxaa uu jooga Pogba, kaas oo isna sameyn ku yelanaya ciyaarta. Waxaan u maleynayaa inay jiri doonaan dagaal u dhexeeya Messi iyo Pogba, inkastoo ay tahay Ciyaar wada jir ah oo ah in ciyaaryahanka uu uu bahan yahay in la dhameystiro oo aysan mesha jiriin kali ciyaared, taas oo qasab ka dhigeysa in aad raacdo sharciga ciyaarta, Dhab ahaantii isbedel ayey sameyn karan. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh, ayuu yirii saaga oo hadalkiisa sii wata.
Ibrahimovic wuxuu xilli ciyaareedkii la qaatay Barcelona (2009/2010), hal xilli ciyaareed iyo badh uu la qaaday Manchester United (2016/2017 iyo 2017/2018
🤔 Què pensa @Ibra_official del #MUFCBarça?
👀 El jugador dels @LAGalaxy dóna les claus sobre el xoc de @ChampionsLeague pic.twitter.com/5W8uL12r3t
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 9, 2019